China Grooved mubato wakapetwa kaviri-kudhirowa pamubhedha kabati solid huni parutivi kabati # 0121 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Grooved mubato wakapetwa kaviri-kudhirowa pamubhedha kabati solid huni parutivi kabati # 0121
Muenzaniso nhamba: Amac-0121
Kukura: 450mm * 400 * 470mm
Inokodzera nzvimbo: yekurara, Hotera, Kudzidza
Hundred-gore huni tsika TV kabati
Iyo chena oak inotengeswa kubva kuNorth America inosarudzwa. Iyo fenicha yakagadzirwa nayo inopesana nekukanganisa, kukweshera, kuora, nyore kuoma, kushomeka zvishoma, nyore kuvaka, uye nyore kunama. Iyo shrinkage rate idiki kwazvo, kuti igone kushandiswa mune inochinja mamiriro ekunze pasina kutsemuka uye mamwe matambudziko. Iyo yakanaka fenicha zvinhu.
Round chamfer dhizaini
Makona eiyo kabhodhi akapoteredzwa uye akatsetseka, uye anotarisira kuchengetedzeka kwako iwe nemhuri yako kubva kune hunyengeri. Mafuta echisikigo emiti yemafuta akabatwa-ruoko uye akaiswa, ayo ane hutano uye ane hushamwari nharaunda, isina hwema hwekunhu. Ruvara rwunochinja uye rwakakora, nekubata kwakapfava, uye haukanganisa runako rwehuni hwehunhu hwehuni. Inozivikanwa se "goridhe kusanganisa" yemiti yakasimba yehuni.
Dhirowa dhiri patafura yemubhedha ine grooved mubato
Iyo dhizaini yakakamurwa kuita maviri dhirowa uye hapana chekuchengetedza kamuri. Inokodzera shamwari dzinoda kuisa zvinhu mukabhoni kuchengetedza chitarisiko checheti chepamusoro chakachena. Gadzira yega yekuchengetedza nzvimbo yakakodzera iwe. Inofananidzwa nemubato wakafumurwa, mubato wakakomberedzwa unogona kudzivisa kukwenya uye kudhonza zviri nyore. Izvo hazvisi chete zvinovimbisa yakapusa uye yemafashoni chitarisiko, asiwo haina kutyisidzira kuchengetedzeka kwako.
Dovetail Tenon Fusion Yakasimba Wood Slide
Dhirowa inofa uye tenon maitiro akasanganiswa neyakaomeswa huni slide njanji, echinyakare chiLuban maitiro, iyo yakareba yaanoshandisa, yakasimba uye inotsvedzerera. Kwidziridza dhizaini yakanangana-yakabatana dhirowa dhizaini, kuti dhirowa ive nesimba rakakura rekutakura uye hapana njodzi yekutsemuka. Tafura yemubhedha yakarongedzwa zvakanaka kutenderedza, isina mabhawa, uye ine hunyoro uye hwakatsetseka dhizaini. Iwe haufanire kunetseka nezve kukwenya kana iwe ukaisa nguvo dzako mukati.
Chimwe-chidimbu chakasimba huni makumbo makobvu akagadzikana
Makumbo akasimba ehuni, akamira pasi pasi dhizaini, dhizaini inotakura-kutakura uye kubatana kwakadzikama nedesktop, 18cm pamusoro penzvimbo inochengeterwa nzvimbo yakachena. Iyo yakapfava inonzwa pazasi pegumbo haina kutsvedza uye inopfeka-inodzivirira, uye dhizaini yemunhu haigone chete kudzivirira pasi kubva mukukwaya, asiwo kurasikirwa kwekukweshera kwemakumbo emapuranga. Iyo-chidimbu chegumbo dhiza dhizaini inoita kuti iyo inotakura-kutakura igadzikane.
Pashure: China Fekitori 8M 10M Inotaridzika Gadzirisa Mhepo Inonyengera Pool Kuyangarara Inflatable Yoga Mat 0395
Zvadaro: Rakareruka rimwe chete dhirowa yekurara husiku padivi kabhineti # 0122
Nyore single dhirowa yekurara husiku padivi ca ...
Nyore Diki uye Pakati Pakati Pet Tende Pet Tende 0269
Light umbozha machena yokudyira tafura nyore combina ...
Solid Wood Sisal Cat Kukanda Bhodhi 0237
Mumwe Door Four mudhirowa Side Cabinet Simple pasofa S ...
Yakakwira-Giredhi Imbwa Kennel Solid Wood Dhizaina Pet Mubhedha ...